နိုင်ငံရေးသတင်း | Myanmar Muslims' Voice (MMV) | Page 2
March 19, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း
ARTICLE 19 welcomes Myanmar’s engagement in the Universal Periodic Review process. We share the concerns of many member states that Myanmar has not yet ratified the main international human rights treaties, particularly the International Covenant on Civil and Political Rights, and urge the new government to correct this through ratification at the earliest
MARCH 14, 2016 Human Rights Watch would first like to acknowledge the excellent work of Professor Yanghee Lee as special rapporteur, especially as she has faced unacceptably harsh and threatening criticism from ultra-nationalist monks during her previous trips, which the High Commissioner has rightly denounced. We acknowledge the important changes Burma has made since 2010
March 12, 2016 နိုင်ငံရေးသတင်း, ရုပ်သံ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှ လွတ်မြောက်ကာ ပြည်သူမှ ရွေးချယ်တင်မြောက်သည့် အစိုးရအဖွဲ့အား ဖွဲ့နိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ-သမ္မတ စာရင်းတင်သွင်းရာ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံး၌ NLD မှ တင်သွင်းသော ကိုယ်စားလှယ်များ မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး စစ်ဘက်မှ တင်သွင်းသူ တစ်ဦးဖြင့် ပေါင်း (၃) ဦးမှ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၅) နှစ်တာ သမ္မတ သက်တမ်းအား တာဝန်ယူခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအရ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် မရရှိသော်လည်း သမ္မတအား နောက်ကွယ်မှ မည်သို့ တာဝန်ယူ
သမ္မတတာဝန် လွှဲပြောင်းရေး အခမ်းအနား မတ်လ (၃၀) ရက်တွင် ကျင်းပရန် သဘောတူ
February 25, 2016 ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ တာဝန်လွှဲပြောင်းမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အသွင်ကူးပြောင်းရေးအဖွဲ့အကြား တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက် မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၁၈) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ မတ်လ (၃၀) ရက်တွင် အခမ်းအနား ကျင်းပရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း7Day Daily သတင်းမှ ဖောပြထားသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သူ ဒီချုပ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းထိန်က ‘‘အစိုးရအဖွဲ့ အာဏာလွှဲ ပြောင်းရေးကတော့ ဘာမှ အခက်အခဲ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ရှောရှောရှူရှူဖြစ်မယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၀န်ကြီးဌာနတွေပေါင်းမယ့် သဘောရှိတဲ့အတွက် ၀န်ကြီးတွေကို မကြေညာရသေးဘူး။ မကြေညာရသေးတဲ့